Archive du 30-nov-2021
Fisamborana teny Anosy Niaro ireo Taxi-moto ny vahoaka
Niverina nihamafy ny hazalambo sy famongorana ireo “taxi-moto” eto Antananarivo. Tetsy Anosy no nanaovan’ireo polisy kaominaly izany ho an’ny omaly.
Efa tena Fanjakan’i Baroa ?
Mbola tany tan-dalàna ve i Madagasikara sa efa tena tafiditra tanteraka ao anatin’ilay hoe fanjakan’I Baroa na Fanjakana loham-boto?
Antenimierampirenena Manampahefana teo aloha 13 hatao fanadihadiana
Manomboka anio talata 30 novambra ny fampanantsoina eny amin’ny Antenimierampirenena ireo olom-panjakana ambony teo aloha miisa 13, miaraka amin’ny vavolombelona,
Koperativa KOFIMI - Itaosy Terena handoa saran-dalana fanindroany ny mpandeha
Anisan’ny taxibe tena mampitaraina fatratra ny mpandeha ny taxibe KOFIMI sy KOMAFILA izay samy miainga eny amin’ny CNaPS Anosy ka hatreny Andohatanjona sy Itaosy Cité.
Prof Sammy Grégoire Ravelonirina “Ho ratsy ny fandehan-javatra…”
Manoloana ny olana mikasika ny fiatrehana ny havesatry ny asa fampianarana sy fikarohana ety amin’ny anjerimanontolo miankina amin’ny fanjakana,
Toamasina Nifanenjana ny Fanjakana sy ny mpanafatra solika
Nanaitra ny tsy fisiana solika tao Toamasina ny faran’ny herinandro teo. Tsy nahitana solika ny ankamaroan’ireo toby mpaninjara, fa zara raha nisy roa nanana tahiry sisa.
Fanambadiana mamarana ny taona Ifandrombahana ny fakana mpikabary
Mandroso ny tontolon’ny kabary ankehitriny, hoy ny avy eo anivon’ny fikambanana Hajan’ny gasy, ary henonao mihitsy hoe misy rivotra mitsoaka eny amin’ny fiarahamonina.
Federasionina Malagasin’ny Baolina kitra Nomen’ny FIFA rariny i Arizaka Rabekoto Raoul
Niparitaka nanomboka ny alahady teo ny taratasin’ny Federasionina iraisam-pirenena ho an’ny taranja baolina kitra na ny FIFA niantefa tamin’ny Sekretera Jeneralin’ny Federasionina Malagasy misahana ny taranja baolina kitra (FMF).
Analanjirofo 10 andro taorian’ny taom-piotazana dia lany ny lodsia
Tsy tena azo nantenaina ny vokatra lodisia tany amin’ny Faritra Analanjirofo tamin’ity taona ity raha araka ny fanazavan’ny lehiben’ny faritra ny Dr Randriamanantena Marcellin.
Madagasikara Anisan’ny vitsy mpitsabo indrindra maneran-tany
Madagasikara no anisan’ny vitsy mpitsabo indrindra maneran-tany nefa be mponina raha araka ny fanazavan’ny dokotera Fidy Bariniaina.
Sehatry ny sôkôla sy laron-tsakafo Hanompanan’ny USAID 5,8 tapitrisa dolara ny “Alliance Tsiro”
Raikitra ny fandaharan’asa “Alliance TSIRO", fiaraha-miombona antoka vaovaon’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena na ny USAID amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina,
Antsanitia-Mahajanga Lehilahy niady vovo maty nihotsahan’ny tany
Raim-pianakaviana iray 60 taona no maty nihotsahan’ny tany omaly maraina tokony ho tamin’ny 09 ora tany Antsanitia ‚ Belobaka distrikan’i Mahajanga II .
Fikajiana ny tontolo iainana “Hanentana fa tsy hanasazy hamboly hazo isika”
Nandray anjara tamin’ny fivoriamben’ny UNESCO andiany faha 40 I Madagasikara ny herinandro teo, raha ny tatitry ny sekretera jeneralin’ity sampan-draharahan’ny firenena mikambana ity eto amintsika, Manda Ravelojaona, omaly.
Volan’ny Banky Iraisam-pirenena averina Tsy ny Fanjakana fa ny Jirama no handoa azy
Nanaiky handoa ny 2,510 miliara Ar ampahany amin’ny 6,910 miliara tamin’ny vola tsy mazava ny nampiasana azy tao anatin’ny tetikasa PAGOSE (Projet d’Amélioration de la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur de l’Electricité)